प्यूठान : कांग्रेसको मत सुरक्षित गर्दै पूर्व सिइओ पोख्रेल, ४१ हजारले अगाडि दुर्गा – Pahilo Page
प्यूठान : कांग्रेसको मत सुरक्षित गर्दै पूर्व सिइओ पोख्रेल, ४१ हजारले अगाडि दुर्गा
प्यूठान । दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्यूठान जिल्ला चर्चाको केन्द्रमा छ । एकातिर कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ पदबाट राजीनामा दिएर मैदानमा उत्रिएका डा. गोविन्द पोख्रेल र अर्कोतिर वाम गठवन्धनकै साझा उम्मेदवारको रुपमा चर्चित वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहकी श्रीमती दुर्गा पौडेलबीचको चुनावी भिडन्तले प्यूठान चर्चाको चुलीमा पुगेको हो ।
प्यूठान जिल्लाले लामो समयदेखि आफूलाई संघर्षशील र लालकिल्लाको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्दै आएको छ । करीव ८० प्रतिशत वामपन्थी मतदाता रहेको प्यूठानले नेपाली राजनीतिका चर्चित हस्तीहरु मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, वामदेव गौतम, लीलामणि पोख्रेललगायतका नेताहरुलाई जन्माएर गर्व गर्दै आएको छ । यी वामपन्थी नेताहरुको ऐतिहासिक विरासत थाम्दै चुनावी मैदानमा भिड्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी छिन्, दुर्गा पौडेलले । ठूलै लाभको पद त्यागेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका डा. पोख्रेललाई भने कांग्रेसको मत सुरक्षित गर्नमै ठिक्क भएर चुनाव निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको देखिन्छन् ।
पुराना र चर्चित नेता मोहनविक्रम सिंहले प्यूठानमा २०१० सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका हुन् । त्यसयता २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा सिंह स्वयं उम्मेदवार बनेका थिए तर झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए । २०४८ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनलाई नेकपा (मसाल)ले बहिष्कार गरेकाले प्यूठानका दुबै क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भएको थियो । २०५१ सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नं. १ मा कांग्रेस र २ मा मसालका उम्मेदवारहरु विजयी भएका थिए । २०५६ को आम निर्वाचनमा एमालेसँगको तालमेलमा दुबै क्षेत्र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विजय हासिल गरेको थियो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले दुबै क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका थिए ।
अन्य जिल्लाहरुमा जस्तै प्यूठानमा पनि पछिल्लो जनादेश स्थानीय तह निर्वाचन नै हो । प्यूठानका ९ वटा तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले माओवादीसँगको गठबन्धनमा १ र एक्लै २ गाउँपालिकामा विजय हासिल गरेको थियो । त्यस्तै, एमालेले एक्लै १ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका जितेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई गाउँपालिका र माओवादी केन्द्रले १ नगरपालिकामा विजय हासिल गरेका थिए ।
जिल्लाका ९ वटै तहमा एमालेले २७ हजार ८ सय ३७, कांग्रेसले २३ हजार २ सय ८२, राजमोले १८ हजार ५ सय ८९ र माओवादी केन्द्रले १७ हजार ८ सय ७९ मत प्राप्त गरेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने हो भने प्यूठानमा वाम गठबन्धनको कूल मत ६४ हजार ३ सय ५ रहेको छ । उता, नेपाली कांग्रेसको मत २३ हजार २ सय ८२ देखिन्छ । यसरी हेर्दा डा. पोख्रेलभन्दा दुर्गा पौडेल ४१ हजार २३ मतले अगाडि देखिन्छन् । डा. पोख्रेलजस्तो बौद्धिक र हाइप्रोफाइल व्यक्तित्व मैदानमा उत्रिएपछि केही मत बढ्नसक्ने तर जित असम्भव रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यता, वाम गठबन्धनले प्रदेशसभामा (क) मा एमालेका हरि रिजाल र (ख)मा माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्कालाई मैदानमा उतारेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले (क) मा टेकप्रसाद भण्डारी र (ख) मा जिल्ला सभापति अमरप्रसाद भण्डारीलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेशसभामा पनि प्यूठानका दुबै क्षेत्रबाट वाम गठवन्धनकै उम्मेदवारहरु रिजाल र खड्का भारी मतान्तरले विजयी हुने देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति : बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४ समय : ८:०२:२२ 1137 पटक पढिएको